MUHIIM U AH JACEYLKA :- Qof aad Jeceshahay makaa tagay FARIINTAAN u qor isagaa kuusoo noqon doonee
Si qarsoodi ah ayaad u xaday qeybkasta oo qalbigeyga ka mid ah adigoo aan igala tashan,haseyeeshee nasiibdaro waxaa iiga sii xanuun badan adigoon soo dhameystiran isku keenida qeybtii ka dhineyd qalbiga inaad ilowday.
* Kelmada waan ku jeclahay markaad ii timid ee aad igu tiri,ma aqaano wixii igu dhacay, jaceylkaaga la’aantiis waan lunsanaa, waxaan dareemay erey walbo oo aad i dhahday in uu runyahay, Jaceylkaaga waa waxa ugu macaan ee nolosheyda soo maray intii aan noolaa.
* Waan jeclahay wax walbo oo dhankaaga ka yimaada, xiisaha fariimaheena jaceylkana waxa ay sal xoogan u yeelayaan jaceylka ugubka ah ee aragtida ku koraya.
* Waxaad Qalbigeyga ka sameysatay mudul salkiisu adag yahay,hadana ay ka buuxaan xiiso, farxad iyo ififaalada hami nolol cusub.
Maalin ayaa i dhaaftay anigoo aanan dheehaneyn dhoolaceyntaadii quruxda badneynd ee waaberi kasto aan ku indha doogsan jiray. Waa dareen xanuun badan Macaan inaad ku fekerto in qofkii aad aadka u jecleyd aad ka tagto adigoofarxad ka heli kara.
Qalbi wadnaheyga adiga ayaan ku siiyey,maadaama adiga uu kuu garaacmayo ma awoodo inaan xakameeyo xittaa hal daqiiqo in aan codkaaga waayo, daqiiqadi aan codkaaga maqlo farxada iyo yididiilo ayaa hareysa qalbigan kuu ooman ee adigu aad hogaanka u heyso.
Nafteyda Ogoow Hore ayaa loo yiri “ Dadka Oonka Caashaqa Sambaba abaarsaday, Hadey kuugu ogaadaan, Afxumo kaama daayaan”.
I L O V E U W A A N K U J E C L H A Y
Qisadaan oo ah Dhacdo murugo leh isla markaana xambarsaan tiiraanyo xanuun badan oo hadaad aqrisato aad dareemeyso xanuun badan adiga oo aysan kugu dhicin qisadaan balse maxaad maleysan kartaa hadii ay kugu dhaci laheyd aqristow?